Doorashada luqaddaada ugu horreysa ee barnaamijka | FromLinux | ChrisADR | Laga soo bilaabo Linux
Doorashada luqaddaada ugu horreysa ee barnaamijka
ChrisADR | | Barnaamijka
Xaqiiqdii tani waa mid ka mid ah su'aalaha ku soo dhaca sanduuqa sanduuqa ugu badan markay tahay barnaamijyada. Haddii aan bilaabi doonno taxane maqaalo ah oo kuu ogolaanaya inaad barato barnaamijka iyo dib u soo celinta aqoonta bilaashka ah ee tabarucaadka barnaamijyada bilaashka ah / bulshooyinka furan ee adduunka oo dhan, waxaa lagama maarmaan ah in laga jawaabo aasaaskan haddii wax yar ay adag tahay su'aal Luqad noocee ah ayaan bartaa?
1 Tiro yar oo taariikh ah
2 Luqadaha mashiinka (heer hoose)
3 Luqadaha heerka sare
3.1 Luqadaha la uruuriyay
3.2 Afafka la turjumay
6 Kee la dooranayaa?
6.1 Wax ku baro wax xiiso leh
6.2 Bilow mashruuc
Si loo bilaabo in la fahmo oo loo doorto luqad barnaamij, waa inaan marka hore wax yar ka ogaanno taariikhdooda, isticmaalkooda iyo shaqooyinkooda, iyo sida ay u xalliyaan baahiyaha kala duwan muddo ka dib.
Luqadaha mashiinka (heer hoose)
Caadi ahaan loo yaqaan Golaha, waa barnaamijyo luuqado ah oo aan ku qeexi karno inay yihiin lahjado luqad guud ah ... Tani waxay u muuqataa xoogaa dhib badan laakiin waxaan doonayaa inaan ku daydo ... Waan ognahay in luqadda caalamiga ah ee xisaabinta ay tahay koronto, tani waxay ka dhigan tahay in ugu dambayntii waxa kumbuyuutar akhriyaa yihiin 0sy 1haa, aan u yeerno tan ekombiyuutarka ingiriiska. Tusaalahan, Isbaanishku waa sharciga aasaasiga ah, laakiin sidaan ognahay, Isbaanishka ay ku hadlaan Latinosku lama mid aha kan looga hadlo Spain, sidaas oo ay tahayna, Isbaanishka reer Peru isku mid ma aha Isbaanishka reer Argentina. Sida iska cad dhamaanteen waxaan wada leenahay isku erey (0sy 1s), laakiin isticmaalka iyo macnaha way ku kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo macnaha guud.
Tani waxay ku dhacdaa heerka processor-ka. Markaan ka hadlayno naqshadaha dhismaha, (amd64, intel, arm, ...) waxaan tixraacnaa lahjadda taas kumbiyuutarka. Tani waa sababta oo ah shirkadaha kaladuwan waxay u fahmaan amarka iyo macnaha qaabkooda, sidaa darteed qaar baa ku kala duwan faahfaahinta sida socodka hadda, ama amarka lagu ilaalinayo. 0sy 1s.
Luuqadahan barnaamijyadu waa kuwo aad u dhakhso badan, maadaama ay ka shaqeeyaan heerka ugu hooseeya ee suurtogalka ah ee barnaamijyada, laakiin iyagu aad ayey ugu tiirsan yihiin qaab dhismeedka oo runtii xoogaa way ka dhib badan yihiin in la barto inta kale. Kuwani waxay badanaa u baahan yihiin aasaas ballaadhan oo fikradaha ah si loo beddelo xogta oo ay ugu shaqeeyaan waxyaabo waxtar leh. Kuwa jecel ciyaarta fiidiyowga, tusaale ahaan wuxuu noqon karaa qalabka loo yaqaan 'SEGA consoles', oo Golaha u adeegsan jiray barnaamijyadooda. Sida iska cad waqtigaas xaddiga xusuusta wuu yaraa marka loo eego maanta, waxayna ahayd lagama maarmaan in la barto luqad sooni karta soona saari karta barnaamijyo fudud.
Luqadaha heerka sare
Kooxdan ballaadhan waxay ka fikireysaa luuqadahaas wixii ka dambeeyay Golaha. Baahida loo qabo helitaanka koodh la qaadan karo ayaa dhaliyay koox luqado ah oo la yiraahdo la soo ururiyey. Kuwaas waxaa ka mid ah, kii ugu horreeyay ee ka faa'iideysta wuxuu ahaa C, oo ku badnaa barnaamijyada heerka nidaamka hawlgalka illaa 70-meeyadii.
Luqadaha la uruuriyay
Aan aragno tusaale wax ku ool ah oo aan ka faaloodo. Aynu eegno barnaamij aad u fudud oo ah luuqadda C oo daabacda hal xariiq oo koodh ah.
Kadib markaan soo uruurino waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
Naqshad u gaar ah: Christopher Díaz Riveros
Laakiin hadda aan aragno waxa aan ku qori lahayn si aan ugu celino isla natiijada ku jirta xeerka Golaha:
Kani waa tarjumaadda 3 khadkeena lambar simple.c, faylka simple.s waxaa loo abuuray iyadoo la adeegsanayo amarka gcc -S simple.c waana waxa processor-kayagu ku fahmi lahaa lahjad Golaha. Sida iska cad si loo abuuro fulin ka kooban 0sy 1s feylku wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo simple.s oo ku xidho maktabadaha la wadaago ee nidaamkeenna. Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo a isku soo aruuriyaha (as) iyo a xiraha (ld).
Luqadaha la uruuriyay waxay ka helayaan faa iido weyn kuwa heer-hoose, iyagu waa la qaadan karo Xayeysiintu waxay soo gudbineysaa koodh lagu fulin karo processor-yada kala duwan iyada oo aan loo baahnayn in loo abuuro lambar gaar ah qaab dhisme kasta. Faa'iidada kale ee muuqata waa fududaanta ay isticmaasho marka la akhrinayo iyo marka la qorayo koodhka. Dhibaatooyinkiisa ugu waaweyn waxaan leenahay kakanaansho aad u sarreysa, maadaama marka la barbar dhigo noocyada soo socda ee luqadaha ah ee aan arki doonno, xorriyadda ay bixiso C waxay noqon kartaa mid waxyeello leh haddii aadan aqoon sida loo xakameeyo, waa hubaal inay tahay qori dhiibis , Waxay ku dhici kartaa in khibrad la’aan qofku ku dambeeyo inuu cagtiisa toogto isagoo isku dayaya inuu qoriga nadiifiyo.
Afafka la turjumay
Waxyaabaha ugu fiican waxaan arki karnaa in safka koowaad uu mas'uul ka yahay wicitaanka turjubaanka (barnaamijka fulin doona codsigeena) iyo koodhka ku xigaa wuu ka "fudud yahay" qaabkiisa C, maxaa yeelay dhammaan shaqada culus waa la qabtay turjubaanka
Luqadaha la turjumay waxay siiyaan horumariyeyaasha lakab weyn oo nabadgelyo ah, maadaama ay leeyihiin kontaroolo nabadgelyo oo adag (KA DIGTOONA in aysan qummaneyn, maadaama xitaa kuwa ugu fiican ay qaladaad sameyn karaan) oo aanan mar dambe u nuglaan doonin halista hub-ka-dhaca iyadoo aan la ogaan, maaddaama isku daygii ugu horreeyey, turjubaanku uu sare uqaadi lahaa digniinta oo la joojinayo fulinta. Faa'iido darrada ugu weyn ayaa muuqata marka la fulinayo barnaamijka, maaddaama ay ka gaabinayso dhiggeeda binary, tani waxay si sax ah ugu wacan tahay xaddiga badan ee farsamaynta si loo hubiyo in koodhku shaqeynayo. Haddii barnaamijku uusan u baahnayn waqtiyada kama dambaysta ah ee aadka u gaaban, farqiga ayaa noqon kara mid aan la ogaan, laakiin haddii aan ka hadlayno kumanaan ama malaayiin xog ah ilbiriqsi kasta, farqiga ayaa si muuqata u muuqda oo lagu arki karo luqadaha la soo ururiyey.
Tani waa astaamo lagu garto luqadaha barnaamijyada, kuwani waxay noqon karaan xoog leh o daciif ah makiinad Waxaan uga tegayaa mowduucan qoraal kale, maaddaama ay lagama maarmaan tahay oo xiiso badan tahay in la fahmo sida xusuusta loogu keydiyo barnaamijka, laakiin hadda waxaan u baahanahay oo keliya inaan kala-duwanaanta muujino: Luqadaha sida adag loo qoro waa kuwa u baahan ogaanshaha nooca xogta la doonayo in looga shaqeeyo doorsoomaha ama joogtada, halka daciif ah noocyada fulin karaan beddelaad sidaas maldahay wax walbana waxay ku xirnaan doonaan kala duwanaanshaha kala beddelashada oo uu ku xigo afka. (Haddii aan hadda la fahmin, dhib malahan, gadaal ayaan uga tagi doonnaa)
Sida wax kasta oo ka jira dunida GNU / Linux, luqadaha barnaamijku waxay ku saleysan yihiin si ku habboon, bulshooyinkuna waa kuwo ku wareegsan. Tusaale ahaan waxaan heysanaa Aasaaska Python o Ruby o PHP o Bash (haddii ay tahay bulshada GNU). Waxa aan rabo inaan ku gaadho tan waa inaanan sheegi karin tirada badan ee faa iidooyinka iyo qasaaraha uu midwalba haysto, laakiin waxaan kuu sheegayaa meesha ay ka jirto luuqad barnaamij bilaash ah, inay jirto beel ay wax ku bartaan kana qayb galaan. Waxaa xusid mudan in qaar badan oo ka mid ah hadaanay ahayn dhamaan turjubaano luqadaha lagu qoro C, ama wax soo saar dhaw ah, horumarkoodaana waxaa inta badan fuliya koox yar oo bulshada ka mid ah, kuwaas oo mas'uul ka ah qaadashada go'aamada saamaynaya dhamaan dadka isticmaala luqadaha. Hay'ado xitaa waa la samayn karaa si loo hubiyo horumarka saxda ah ee luqadda, sida ku dhacda C.
Kee la dooranayaa?
Hore ayaan uga hadalnay luqado kugu filan welina kamaan jawaabin waxa ugu muhiimsan 😛. Laakiin waxaan rajeynayaa in ka dib markaan dib u eegay maqaalkan yar aysan muhiim ahayn inaan kuu sheego luqadda aad dooranaysid, maadaama macluumaadkan aad awood buuxda u leedahay inaad raadiso mid dhaliya xiisaha. Sida iska cad hadaad rabto inaad wax ku barato barnaamij ku baxa luqad Golaha waqti dheer ayey qaadan doontaa kahor intaadan helin wax shaqeynaya, waqtiga ayaa si weyn loo dhimi doonaa haddii aad doorato luqad la soo uruuriyay, halkaas oo marka lagu daro haysashada * nidaamka NIX, waxaad awoodi doontaa inaad barato macluumaadka ku saabsan hawlgalka isla nidaamkaas, tan iyo markii aad ku jirtay la xiriirida C ama derivatives waxay kaa dhigeysaa hal ama mid kale inaad barato sida nidaamka qalliinka u shaqeeyo guud ahaan. Ugu dambeyntiina, haddii aad rabto inaad wax barato iftiin taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax badan qabato adigoon u baahnayn inaad fahamto wax badan, luqadaha la tarjumay ayaa ah hab xiiso leh oo lagu barto laguna horumariyo xirfadaha barnaamijyada.
Wax ku baro wax xiiso leh
Tan tan ugama jeedo inaad abuureyso isku-duwaha soo socda, ama xitaa luuqadda soo socota ee barnaamijyada, mashruuc ayaa ku xallin kara cayayaanka yar ee barnaamijka aad jeceshahay, laga yaabee xitaa inuu kaa caawiyo hagaajinta dukumintiyada. Maxay tahay sababta dukumiintiyada loo haysto? maxaa yeelay ma jirto dariiq ka fiican oo lagu baran karo sida ay softiweerku u shaqeeyaan marka loo eego akhriska iyo ka-caawinta qorista dukumiintiyadiisa, maxaa yeelay ka dib koodhka isha, waa isha ugu weyn ee macluumaadka aad ka heli doonto barnaamijka. Daqiiqad kale waxaan arki doonaa sida loo aqriyo koodhka mashruuca loona fahmo shaqooyinka iyo qiyamka ay kasbadaan.
Aad baad ugu mahadsantahay imaatinkaaga halkan iyo sidii had iyo jeerba, fikradahaagu waxay iga caawiyaan inaan abuuro nuxur wanaagsan oo aan ogaado meesha aan diirada saarayo, Salaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Barnaamijka » Doorashada luqaddaada ugu horreysa ee barnaamijka
Sida had iyo jeer ah 10 !!!!!! Waad ku mahadsantahay qoraaladaada. Salaan iyo inbadan oo soo socota !!!!
Aad baad u mahadsantahay 🙂 waxay igu dhiiri galinaysaa inaan sii wado qorista. Farxad
Waxaan u maleynayaa inay qalad tahay in la weydiiyo su'aasha ah "luqadee la dooranayaa?" Anigu waxaan ka mid ahay kuwa u malaynaya in luuqadu ugu yartahay, muhiimadu waxay tahay in la barto aasaaska barnaamijyada iyo in "loo xisaabiyo xisaab." Go'aan ka gaar ah qaabeynta, qoritaankeeda, haddii ay taageerto OOP, adeegyadeeda, iwm. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax si dabiici ah ugu imaan doona istudiyaha iyo dhamaantiis, barnaamij-bixiye kasta wuxuu yaqaan in ka badan 1, 2 iyo 3 luqadood ... waana ku mahadsan tahay fikradaha barnaamijka (oo aan ahayn syntax) uu haysto, wuu awoodaa in laguugu barnaamijyo luqad aadan wali khibrad u lahayn.
Si kastaba ha noqotee, marka la bilaabay, waxaan u maleynayaa in luqadda wanaagsan ay noqon karto Python fudaydkeeda, laakiin waxaas oo dhan ka sii sarreeya, wax yar ka sii soco, baro algorithms oo ogow sida wax u shaqeeyaan "gudaha".
Hi Rubén, waad ku mahadsan tahay wadaagista
Waxaa jira wax aan ku bartay waqti ka badan adduunka barnaamijka, oo ah "kan wax badan daboolaya ma cidhiidhiyo" oo weedhan caanka ah waxaan ula jeedaa in marar badan, iyo gaar ahaan kuwa ugu xiisaha badan, ay go'aansadaan inay iskuday waxoogaa dhan, oo leex leex leex leex leex leex leexad badan oo ah sidaad u baranaysid koodh gareynta. Waxaan rumeysanahay, waana fikrad shaqsiyeed, in horumariye wanaagsan uu yaqaan oo barto luuqad isku dubaridka iyo luqadda turjubaanka, marka lagu daro lahaanshaha fikrad lahjadda Golaha qaarkood.
Sababta ayaa ah tan soo socota, tusaalayntu waa inay marwalba noqotaa wax fudud oo dhakhso leh, fudud oo wax soo saar iyo taasi guud ahaan waxay muujineysaa natiijo, laakiin haddii aysan ku filnayn, waa inay jirtaa "qorshe B" oo la adeegsado marka turjubaanku yimaado xadkeeda.
Ogaanshaha lahjadda Golaha ma aha oo kaliya kalsooni laakiin waxay sidoo kale ku baraysaa inaad ka fikirto "xisaabinta", laakiin sida iska cad qaybtani waa tan ugu murugsan dhammaan, waana runtii wax aan dhammaan barnaamijyadu u imaan.
Laakiin dib ugu laabo mowduuca, maxaa yeelay fikirka ugu weyn ee aan isleeyahay waa, "dooro luuqad oo ku dhaqmo LOT", maxaa yeelay runtii sida kaliya ee aad ugu fiicnaan karto barnaamajyada waa aqrinta iyo qorista koodhka, tanina waa wax aan ka bartay bulshada kernel Markaad isla ereygaas haysato waqti dheer, waxaad joojineysaa inaad aragto foomka oo aad bilowdo inaad ka walwasho DUL-GALKA. Fikradda ah in luuqad ama sicir lagu xusho bilowga ayaa ah in qofku awood uleeyahay inuu caadeysto aqrintiisa iyo qoristiisa taasoo ah inuu bilaabi karo inuu aqriyo MAGACA barnaamijka halkii laga isticmaali lahaa qaabka barnaamijka.
Tani waa sababta ugu weyn ee qoraalkan, in mid walboo doorto afkiisa si tan soo socota aan u sharxi karno fikradaha, laga yaabee tan shakiga ayaa lagu caddeeyay 🙂
Salaan iyo mahadsanid wadaagis.
waad ku mahadsantahay boostada way fiicneyd.
Waa salaaman tahay Deibis, waad ku mahadsan tahay wadaagista 🙂 Salaan
Taladayda: wax kasta oo aan ahayn PHP. Labaatan sano ka hor PHP waxay macno gaar ah u sameysay jiritaankeeda sababtoo ah kakanaanta heerka sare ah ee ku baahinaysay Websaydhka luqad kale iyadoo la adeegsanayo CGI. Laakiin maanta waxaa jira qaabab fara badan oo kala duwan si horumarka Web-ka looga dhigo mid aad loogu raaxeysto luqadaha xoogga leh, sida Django for Python, Spring for Java ama Rails for Ruby. In kasta oo PHP ay hadda ka muuqato shaxanka luqadaha oo dhan, haddana sidaan qabo PHP waxay lumin doontaa ku-xirnaanteeda waqtiga.
Waxaan si adag ugula talinayaa in laga bilaabo C \_ C ++ si loo fahmo xaqiiqada barnaamijka, in kasta oo qalooca waxbarashadu yahay mid taag badan.
Hi Jorge, waad ku mahadsantahay wadaagista, kaliya waxaan xasuustaa Laravel, oo ah qaab dhismeed quruxsan oo adag shaqsiyan weligey kumaan jeclaan Guga ama Java horumarka webka, waxaan u arkaa inay tahay wax aad u dhib badan, laakiin waxaan qiyaasayaa inay ka mid tahay waqtiga ay ku jireen. suuqa, waqtigaas waxay ahaayeen horyaal runtiina maanta beddelka casriga ah (Js, Python iyo Ruby) waxay awoodeen inay hagaajiyaan habka loo soo bandhigo nambarka la aqrin karo waxna laga beddeli karo iyadoo aan shaqo badan la qaban.
Waxaan sidoo kale u janjeeraa dadka baranaya C / C ++ waqti uun noloshooda, waxaan ku bilaabay Java, laakiin waxaan qiyaasayaa taasi waa quruxda barnaamijka, waxaad ku bilaabi kartaa wax alla wixii aad rabto, ilaa intaad joogto tahay way noqo mid waxtar leh 🙂 Farxad
Anigu kuma diidi karo adiga mar dambe. Waxaan bilaabay sanado badan kahor C iyo VB, si aan hadhow diirada u saaro PHP iyo JS (maadaama aan diirada saaray horumarinta webka) markii dambena intii aan baranayay waxaan bartay C / C ++ iyo Java inta badan.
PHP waxay leedahay faa iidooyin badan oo aanan ku qori karin fariintan. PHP7 waa ka dhakhso badan yahay (ka dhaqso badan yahay Python ... adigoon isticmaalin hhvm, keydyo kala duwan, qaababka sida Phalcon ama bytecode marka laga hadlayo Python), waxay leedahay tiro aad u tiro badan oo maktabado iyo qaabdhismeedyo ah, waxay leedahay tiro aad u fara badan oo si toos ah loo hirgeliyey in la isticmaalo iyaga wakhti kasta, qaabeyntiisa oo la mid ah C ayaa aad u fudud in loo guuro luqado kale.
30% shabakadaha adduunka oo dhan waxaa lagu sameeyaa WordPress (PHP) taasna waxay umuuqataa inaysan waxba iska badalin, Wikipedia ayaa adeegsata, Facebook (oo leh hhvm) iyo boggag tiro badan, wadar ahaan, 80%.
Waxaan ku xasuusinayaa in Ruby on Rails sida Django ay jiraan 12 sano! Maxaa kooto ah oo ay ku guuleysteen waqtigan? Dabcan, waxaan kahadleynaa 2 qaabdhismeed oo ficil ahaan gacanta ugu jira oo aysan jirin nooc kala-jajab ah. Maxay yihiin waxyaalo kale oo halis ah oo aan haysto? Sheegida in PHP ay lumineyso ku xirnaanshaha macno yar ayey sameyneysaa.
Ruby waa luuqad aad u xiiso badan, laakiin wax badan ayey ku jabtaa qaabab aasaasi ah oo ay igu adag tahay inaan aamino inay ka caan baxday PHP. Dabcan, Ruby waxaan u maleynayaa inuu yahay luqadda ugu xun ee lagu bilaabo barnaamijyada dhammaantood.
Waan fahamsanahay inaad ii sheegto in Python uu ku raaxeysan karo barnaamijka, xitaa Ruby oo leh astaamo aan xad lahayn ... laakiin Guga oo leh Java? Runtii? Java waxay noqon kartaa waxyaabo badan ... laakiin ka raaxo badan Python iyo PHP?
Dhamaantiin waa wax aad u wanaagsan in laga bilaabo Python, laakiin maadaama aad kaliya ku dhegan tahay Python, waxaad halis ugu jirtaa in shirkado badan ay aaminaan in heerkaaga barnaamijka uusan aheyn "qoto dheer" (xitaa haddii aad ku fiican tahay Python). Sababtuna waxay tahay waxaad la tartamaysaa luqadaha kale ee "multipurpose" sida C ++ ama Java. Waad ku barnaamijsan kartaa Python adigoon ogayn kala duwanaanshaha waxa cadaabtu tahay tilmaame, hawlgallo xoogaa yar, sida qashin ururiyaha u shaqeeyo iyo dherer iwm.
Python wuxuu u egyahay inuu uguyaryahay "barnaamijyada caadiga ah" ee jira loona arki karo inuu yahay "luqadda carruurta" (hel sarbeebta), taa beddelkeeduna waa faa'iido iyo khasaare.
"Python waxaa laga yaabaa inuu ugu yar yahay 'barnaamijyada caadiga ah' ee jira oo loo arki karo 'luqadda carruurta' (faham sarbeebta), taasna iyaduna waa faa'iido iyo khasaare." LOL, tani waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu qosolka badnaa ee aan arko ee laga yiri Python. Weligaa weligaa miyaad baratay Python?
Mudo intee le'eg ayay adduunka ka jirtay meel ka baxsan PHP?
Saaxiib PHP wali may dhalan. PHP (\_ d +) waxay leedahay wax badan oo jiidis ah iyada oo ay ugu wacan tahay naqshad bilow ah oo aad u xun iyo si loo ilaaliyo bulshada isticmaalaha waxay ku sii jiidanaysaa dhammaan khaladaadka naqshadeynta hore si aad u wanaagsan. PHP wuxuu ku dhashay bilaa modular, oo leh waxqabadyo badan oo C-style ah (taas oo markaa jirta, anigu garan maayo meesha aad ka timi taas oo ah maaddaama qaab-dhismeedkeedu u eg yahay C ay si fudud ugu gudbin karto luqado kale). Luuqad heer sare ah, sida PHP waa inay udhaqantaa, waxay leedahay waxyaabo foolxun sida raadkan shaqooyinka ku qoran boggooda rasmiga ah http://php.net/manual/en/indexes.functions.phpTani waa sababta oo ah waxay ku dhalatay bilaa modular, sidaa darteed wax waliba waa nijaas isku qasan oo aan lahayn meelo magac leh
Kani waa qayb ka mid ah koodhka PHP:
Waqtiga ka mid ah miyaad ka go'aansan kartaa halka laga keenay waxyaalahan 'qulqulka' ah? MAYA, markaa waxaad oran kartaa waa waxqabadyo dhisme ah, laakiin markaa nidaamka deegaanka oo dhan ayaa ah waxqabadyo dhisme ah? Marka, sidaa darteed, qashin badan ayaa ku jira lambarka PHP, in haddii aadan awoodin inaad fahanto kakanaanta iyo faa iidada la'aanta naqshadeynta xun, i cafi laakiin wali waxay leedahay adduunyo badan oo la arko.
Wordpress waa xalka ugu fiican ee softiweerka, laakiin tani macnaheedu maahan inay leedahay saldhig farsamo oo wanaagsan. Waad ku garaaci kartaa dhagax oo waxaad ku bixin kartaa musbaar ilkahaaga, welina waad qaban kartaa shaqo nijaarnimo oo aad u fiican, laakiin dabcan, shaqo aad u badan ayaa ka badan najaaristaha kale ee adeegsada dubbare wanaagsan.
Dhanka kale: "noqo barnaamij 20-ka saacadood ee Python-ka ah kuna shaqee", weligay ma arag nacasnimo sidan oo kale ah. Waad abuuri kartaa degel PHP ah 20 saacadood gudahood adigoon wax aqoon ah u lahayn sida ay u shaqeyso barnaamijyada shabakaddu, ama barnaamijka laftiisa. Xaqiiqdii, tani waa sababta PHP ay caan u tahay, maxaa yeelay dadka cusub ee soo galaya adduunkan waxay u arkaan PHP dhibic ka mid ah horumarka degdegga ah (taas ayaa ah sababta aad u badan nuqulka PHP aad u dhuuqmo).
Marka laga hadlayo cilladaha Python, midka kaliya ee ay ku guuleysatay wuxuu ahaa la shaqeynta tilmaamayaasha, laakiin sikastaba xaalku ha noqdee, Python waa luuqad heer sare ah (sida Java oo kale) umana adeegsaneyso iyaga heerka syntax; laakiin hawl yarayn, dhab ah, waxaad u jeeddaa tan x << y, x >> y: https://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators. Waxaan si dhab ah u fahmay qashinka aruuriyaha wax aad uga yar: https://docs.python.org/3/library/gc.html.
-PPP wuxuu leeyahay naqshad barnaamij (OOP) aad u liita oo ujeedo leh.
Weli kama adkaan kartid hawlwadeennada.
- Yaab, function overloading PHP-ga maaha waxa aad si dabiici ah uga filayso fikradan.
… .. oo hada waan caajisay hehe.
Waxaan galiyay qaansooyinka "faham sarbeebta" (adoo isbarbardhigaya Python iyo C ++ / Java isla goobta shaqada), way cadahay inaadan fahmin. Waxaan kuu sheegi karaa in barnaamijka C ++ uu Python wax ku baran karo si ka dhakhso badan kan Python programmer-ka uu ku baran karo C ++, sida oo kale layaab malahan in celceliska mushaarka C programm C / C ++ uu ka sarreeyo kan Python-ka.
Waxaan kuugu sharixi lahaa tusaalooyin kale, xitaa sawir! laakiin waxaad moodaa inaad kaliya diirada saareyso decontextualizing iyo jees jees wixii aan dhigay.
Marnaba ma dhihin PHP waa luuqadda adduunka ugu fiican ama wuxuu leeyahay naqshad ku dayasho mudan, ma garanayo halka aad ka hesho taas. Waxaan u maleynayaa intaadan xukumin aqoonta dadka kale inaad hagaajiso fahamkaaga akhriska. Waxa runta ah (oo aan ku idhi farriintayda) ayaa ah in ku sii horumarinteeda ay aad u dhaqso badan tahay, marka lagu daro dhammaan nidaamka deegaanka ee qaabdhismeedka, maktabadaha iyo yutiilitiyada aad ka heli karto.
Sidoo kale, isbarbardhig noocee ah ayaan sameynaa? Python oo ah luqad dhowr ujeeddo ah ama websaydhka ah? Markay sidaa tahay, maxaan ugu barbar dhigeynaa PHP? PHP waxay leedahay goob cayiman, waana goobtaas meesha Python (oo leh saamiga 0.2%, oo aan isbeddelin sannadkan) ay iskaga dhafan doonaan PHP.
Hadda aan aragno isbeddelada PHP; laga bilaabo 82,4% Janaayo 2017 ilaa 83.1% Janaayo 2018: https://w3techs.com/technologies/history_overview/programming_language
Python miyuu ka sii deynayaa PHP? Sanadkee? shantii sano gudahood? toban sano?
Python wuxuu awoodi doonaa in loo isticmaalo howlo kale oo badan, xitaa wuxuu noqdaa mid si weyn looga isticmaalo PHP, laakiin Python oo ah luuqad horumarineed oo webka ah ayaa sanado fudud ka fog xitaa inuu ahaado mid ku habboon, 0.2% wuxuu ku istaagayaa 83.1% (oo kor u kacaya sanadkan) .
Waxaad sidoo kale u qaadaneysaa waxyaabo fudfudud adigoo dhahaya ma wareegayo meel ka baxsan PHP, adoo tilmaamaya inaan ogahay kaliya PHP, marka si sax ah aanan barnaamij uga sameynin PHP waqti dheer haha. Waqtigan xaadirka ah, sababo shaqo awgood, waxaan inta badan barnaamijka ka sameeyaa Java.
Sidoo kale ma dhihin barnaamijyada Python-ka kuuma lihid aqoon ku saabsan xoogaa yar, qashin ururiyaha ama tilmaame. Halkii, waad ku barnaamijsan kartaa Python adigoon xitaa ogeyn waxa ay tani tahay. Si kastaba ha noqotee, waxaan aad uga shakisanahay inay taasi noqon laheyd kiiska barnaamij C ++. Iyo sida iska cad waxaan sameeyaa isbarbardhigga marka Python uu soo galayo goobtaas "luqadda badan", ee looguma talo gelin barnaamijyada shabakadda.
Ku noqo barnaamij barnaamij 20 saacadood gudahood waa kaftan, buun buunin. Si kastaba ha noqotee, waxaan halkaan kuugu dhigi karaa xiriiriyeyaal kala duwan oo ku saabsan barnaamijyada waxbarashada ee internetka iyo koorsooyinka ballan qaadaya waxyaabo la mid ah Ha i eedeyn, ku eedee suuqa shaqada oo u maleynaya in noqoshada "barnaamij khabiir barnaamij" ay tahay arrin qaadashada koorso 20-saac ah. Iyo Python oo ah mid ka mid ah luqadaha moodada ah iyo sidoo kale, iyadoo qalooca ugu dhaqsaha badan ee barashada ... caddaan iyo dhalo.
Waxaan ku adkeysanayaa, inaad fariintaada ku saleyso inaad dhahdo sida xun ee PHP (taas oo qayb gaar ah, waan ogolahay). Waxay ila muuqataa inay sax tahay, marka laga reebo in fariintaydu aysan taas ku saabsanayn, laakiin maxay tahay sababta PHP ay usii wadi doonto adeegsiga beritona ma baabi'i doonto sidaad moodeyso.
C -> Go -> (Lisp | Haskell | Java | waxkastoo)
Dhawaan akhristaha ayaa ii soo diray talobixin ku saabsan buugga Go ee e-maylkayga, runtiina waa luuqad la tixgelinayo mustaqbalka oo laga yaabo inay halkan ku jiri doonto qoraal post Sawirro badan oo aan la wadaago
Hagaag ... oo maxaan sameeyaa? Maxay tahay sababta loo barto luuqad barnaamij oo maanta leh barnaamijyo wanaagsan oo khibrad leh oo horay u jiray? Dhibaatooyin noocee ah ayaan xallin karaa oo kuwa kale aysan horey ugu xallin si wax ku ool ah oo aad u waxtar badan? Sideen ulashaqeeyaa kuwa kale anigoon laygu dhufan ama la iga reebin aqoon yarida iyo waayo aragnimadayda?
Waad salaaman tahay mvr1981, su'aalaha runtii xiisaha leh 🙂 waxaan dib uga noqoneynaa kii ugu dambeeyay ilaa kan koowaad.
Sideen ulashaqeeyaa kuwa kale anigoon laygu dhufan ama la iga reebin aqoon yarida iyo waayo aragnimadayda?
Hadaadan rabin laad, talaabada ugu horeysa waa inaad barato nidaamka, ma qiyaasi kartid tirada dadka imanaya mashaariicda doonaya inay wax u qabtaan si keli ah qaabkooda, iyagoo doonaya in bulshada ay la jaanqaado rabitaankooda. Xaqiiqdii waa sida aniga oo kale inaan imaado gurigaaga oo aan sameeyo qas iyo ixtiraam la'aan reerkaaga (taasi waa sida ay marar badan dareemeyso). Haddii aad rabto inaad ka hortagto inay taasi dhacdo, fiiro gaar ah u yeelo tilmaamaha si aad wax ugu biiriso, macnaha habka loo sameynayo, hana u dirin wax aan dhammeystirnayn, haddii aad u baahan tahay caawimaad marwalba waxaa jira habab lagu wada xiriiro, laakiin shaqo si liidata loo qabtay waxay u badan tahay inay abuureyso aragti ugu horreysa oo xun. Haddii aadan rabin inaad iska saarto naftaada taasi adiga ayey kugu xiran tahay, waxaad u arki kartaa inuu yahay barnaamij-laawe aan faa iido lahayn oo aan aqoon waxa uu sameynayo ama midka uu u marayo inuu noqdo barnaamiji aad u wanaagsan, taasna waxay ku dhacdaa oo keliya ku celcelinta iyo hubaal in cayayaanku socdo. Waan khaldanaa marar badan kahor intaanan helin heerka horumariyahayga ee Gentoo, taasna igama horjoogsan inaan isku dayo inkasta oo "waqtiga xun" uu jiro 🙂.
Sidee asal u tahay inuu noqdo barnaamijye maanta?
-Waa asal ahaan maahan, ee waa daruuri maanta, kaliya ka fikir waxyaabaha soo socda, 20 ama 30 sano ka hor, makiinad qoristu waxay ahayd daruuri, shaqooyin badan ayaa lagusoo koobay oo aad taqaanay ama uguyaraan sameyn kara. Maanta ogaanshaha Xafiiska waa daruuri, ficil ahaan ma jiraan wax shaqo ah oo aan ku hor dhigaynin dukumintiyada Xafiiska. Berri, goor dhow, barnaamijku wuxuu noqon doonaa baahi. Tanina sidoo kale waxay khuseysaa aragtida shaqsi ahaaneed, adigoo og waxa ka dhacaya barnaamijyada aad u aaminto waxyaabaha sida ugu muhiimsan ee lacagtaada, caafimaadkaaga, qoyskaaga, ay aniga ii yihiin wax macquul ah, maxaa yeelay waxaad ogaan kartaa oo keliya xaddiddooda haddii aad ogtahay sida ay u shaqeeyaan iyo si aad u ogaatid, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida wax loo dhigto.
Dhibaatooyin noocee ah ayaan xallin karaa oo kuwa kale aysan horay ugu xallin si ka waxtar badan?
-Waad la yaabi lahayd inta muuqaalada taas ayaa loo baahan yahay maanta, iyo in runta la sheego, wax macno ah ma leh inay jiraan barnaamijyada ugu wanaagsan adduunka ee bulshada dhexdeeda, shaqadu had iyo jeer way ka weynaan doontaa awoodda shaqo ee soo-saareyaasha, tan waxaan ku xaqiijin karaa Gentoo, halkaas waa dad soosaara abuurka, dadka u shaqeeya Google, Sony, iwm iwm ... waxa kaliya ee aan wada leenahay ayaa ah in qofna uusan heysan waqti badan sida uu jeclaan lahaa inuu qabto dhamaan howlaha sugaya.
Maxay tahay sababta loo barto luuqad barnaamij oo maanta leh barnaamijyo wanaagsan oo khibrad leh oo horay u jiray?
Tan waxaa looga jawaabayaa su'aasha labaad 😉 Laakiin hadda waxaan ku dari karaa in jiilalku ay awoodaan inay taageeraan shaqada horay loo soo saaray, tan waxaan ula jeedaa in kuwa "khibrada leh" ee horumariya ay si tartiib tartiib ah u baaba'ayaan oo ay lagama maarmaan u noqon doonto "dhalinyarada »Horumariyayaashu waxay qaadayaan mas'uuliyad waxayna ka caawinayaan inay meertadu sii noolaato, bulshada aan lahayn da 'yarta iyo khibrad la'aantu waxay u nugul tahay waqtiga ka dib, si sax ah maxaa yeelay ma jiri doonto fursad lagu faafiyo aqoonta.
Maxaan jadwal u sameeyaa?
-Waa laga yaabaa inay tahay tan ugu adag ee laga jawaabi karo, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan ku siiyo tusaale poco aan dhawaan bilaabay inaan la kulmo dhibaatooyin la xiriira GNOME 24 iyo ku xirnaanshihiisa Wayland oo ka horjoogsanaya barnaamijyada sida Shutter inay qaataan shaashadaha. Tani dhib bay igu tahay aniga maxaa yeelay markaan qorayo qoraalladayda, waxaan u baahanahay inaan ku tuso waxaan idhaahdo 🙂 xoogaa hareerahaaga ayaan imid arjiga GNOME Screenshot, xoogaa "minimalist" ah inaan sheego ugu yaraan. Hawlaheeda, waxaa ka mid ah qaadashada gobolka shaashadda, laakiin maxaa dhacaya haddii aanan si fiican u qaadin sawirka? Waa hagaag, waa inaan ka tago oo aan dib u galo barnaamijka, wax daal badan oo hubaal ah, badhan oranaya «Dib-u-celin» ama wax la mid ah ayaa ii oggolaanaya inaan qabsado cusub anigoon ka tegin oo aan mar kale soo galo ayaa i caawinaysa. Mashruuca barnaamijka, waligay barnaamij kamaan sameynin qaab dhismeedka GNOME sidaa darteed sida iska cad waxaan hayaa wax badan oo aan barto ka hor inta aanan u soo dirin "patch" -ka badhanka cusub, laakiin inta aan ku guda jiro waxaan bartay barnaamijyada waxaana rajeynayaa tan feature waxay caawin doontaa in kabadan hal markii la wada heli karo.
Tani waa tusaale, waa wax fudud waana hubaal in barnaamij kale oo "khabiir" kale ah uu horeyba u qaban karay, laakiin waqtiga oo muuqda awgood, sidaas ma ahayn sidaas oo kale, hadda waxaan ahay kan ay suuragal tahay inaan sameeyo, iyadoo aan dhab ahaan noqon super barnaamij
Hadda adiga ayey kugu xiran tahay inaad hesho wax noloshaada ka dhigaya "mid fudud" barnaamijkaas aad inta badan isticmaasho, quruxda taas ayaa ah haddii aan raacno talooyinka aan kugu siinayo qodobbada soo socda, luqadda waxba ma tareyso, maxaa yeelay Waxaad ogaan doontaa waxyaabaha aasaasiga ah si aad u bilowdo inaad fahanto koodhka aad akhrido oo aad wax ka beddesho si aad u sameyso waxa aad rabto, taasi waa dareen gaar ah special
Salaan iyo mahadsanid markale
Waxaan u maleynayaa in kaliya hal mar aan furay barnaamijka qabashada gnome, waxa ugu fudud ayaa ah inaan aado astaamaha kumbuyuutarka oo aan u qoondeeyo seddex isku dhafan oo daabacan si aan u qabsado dhammaan daabacaadda si aan u qabsado daaqada firfircoon iyo daabacaadda super-ka ah si xulasho looga sameeyo qabashada gobol, toobiyeyaasha la heli karo ayaa halkan yaal, kaliya waa arrin loo qoondeeyey
Taasi waa sababta aan tusaale kuugu siineyno 🙂 maxaa yeelay waxyaabaha yaryar sida batoonkaas ayaa ah barnaamij, waxay ka caawin karaan qaar sida ay u ogaan karaan kuwa kale, laakiin dhab ahaan waxay la kulmaan ujeeddada ugu weyn, waxay ka caawiyaan inay bartaan barnaamijka, oo ay u baneeyaan astaamo cusub, Badhankaas kadib waxyaabo badan ayaa la bilaabi karaa, sida maaraynta kal-fadhiga, ama shaashad horudhac u ah dhammaan sawirada la qaaday, ama marka la soo koobo, waxyaabo badan oo la qaban lahaa. Fikradda ayaa ah inaad hesho wax kaa dhigaya inaad ka boodo xiisahaaga, software kasta oo ku shaqeeya nidaamkaaga wuxuu u baahan karaa horumarin ama astaamo cusub oo ay ugu wacan tahay waqti la'aan ama shaqaale aan weli la hirgelin yet
Waad ku mahadsan tahay. waa jawaabo aad u wanaagsan.
Hagaag, qof aan u noqon doonin xirfadle goobta, waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la arko jawiga ay ka shaqeeyaan, labadaba howlaha maamulka iyo tilmaamaha waxay noqon kartaa mid xiiso leh in la ogaado, tusaale ahaan, Python / Basic iyo ogaanshaha sida loo abaabulo macros xirmooyinka xafiiska sida LibreOffice ama MS Office. Waxaa jira waqtiyo ay tani badbaadin karto saacado badan oo shaqo adiga ama shaqaalaha kale ee kugu hareeraysan oo aad weydiisato inay qabtaan hawl kasta oo soo noqnoqda, waxaad abuuri kartaa shaashad si dhakhso leh loo xisaabiyo saamiga ugu weyn ee shirkadda ka dib markaad ku xirmato keydka macluumaadka waxaa ka mid ah oo ay qabtaan qaar ka mid ah weydiinta SQL.
Sida wax walba oo kale, haddii aad taqaanno qalabka farahaaga ku jira waxaad ka fikiri kartaa sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo. Wax walba ma ahan wax la sameeyay.
Guillermo, gebi ahaanba waa kugu raacsan tahay, "Wax walbaa lama allifto" wixii la alifayna waa wax laga beddeli karaa. Waa inaad sida ugu habboon uga faa’iideysataa qalabka oo aad u isticmaashaa midka sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga.
Barnaamijyada, luqadda koowaad ee la barto waa Ingiriisiga, ka dibna midka iyaga aadka u jecel ee u muuqda kan ugu qurxoon iyaga.
Anigu maan qorin, laakiin waa run 🙂 garashada Ingiriisiga wax badan bay tartaa maadaama luqadaha badankood lagu qoro, laakiin sidoo kale sababta oo ah tirada ugu badan ee macluumaadka gacanta koowaad sidoo kale Aad baad ugu mahadsantahay wadaagista
Maqaal aad u fiican, marka lagu daro dhiirigelinta.
Jawaab Ruben Salgado
Aad u naxariis badan, aad baad u mahadsan tahay 🙂 Salaan
Barnaamij-sameynta waa garashada sida loo fasiro loona turjumo sababahaas tilmaamo.
Laba caddayn oo ku saabsan maqaalka:
1) Iyada oo ku saleysan khibradeyda macallinimo ee barnaamijyada muddo ku dhow 10 sano, macno malahan luqadda aad ku baraneyso, laakiin sidaad wax u baraneyso iyo sida ay u adag tahay.
Waxaan u maleynayaa in luqad lagu baran karo qaab dhismeed, ka dibna loo gudbo waxyaabo kale oo aad u adag, inay ka sahlan tahay bilowga luqad sida Java ah bilowgii.
Way fududahay in la barto wax la mid ah Hello World ee C ama Pascal oo saldhig u ah, marka loo eego xariiqyo yar (BARNAAMIJ kiiska Pascal, ama #ku dar Marka laga hadlayo C) waxaad bilaabi kartaa inaad sameysid algorithm isla markaana aad koodhka barnaamijka si toos ah ula macaamisho, sida Java, oo lafteeda lafteeda u baahan fasal, qaab, iyo waxyaabo kale oo bilowgu yahay macluumaad xad dhaaf ah oo aan loo baahnayn, waana laga yaabaa in si fiican loo iska indhatiro oo loo dhaqaaqo waxyaabo kale, laakiin iyagu waa fikrado jira, oo sida aan qabo, indha indheynta waxyaabaha maahan hab wanaagsan oo wax lagu barto, gaar ahaan haddii luqaddu kugu qasbeyso inaad isticmaasho. Waxay u egtahay sidii loo bilaabi lahaa tababarka bartilmaameedka markii ugu horeysay ee M-16, iyo toogashada bilaha ee qaab-otomaatig ah oo xajinaya labada gacmoodba sida bastoolad.
2) Haddii luqad la fasiro ama la soo ururiyo waxay kuxirantahay dhaqan gelinteeda, kuma xirna luqadda lafteeda. Tusaale ahaan, haddii Python loo adeegsado, barnaamijka webka ee adeegsada wsgi (ama mod_wsgi ee apache, ama uwsgi ee Nginx), koodhka Python waxaa la soo uruuriyaa marka la bilaabayo qaybta u dhiganta, iyadoo la soo saarayo faylal .pyc
Waxa kale oo jira matoorro faylal binary ah oo loogu talagalay java (oo soo saaraya binaries halkii ay ka noqon lahaayeen bytecode), ama isku-duwaha qoraallada php-ka ee ku jira labalaabka saafiga ah.
Marka laga hadlayo waxa ay ka yiraahdaan PHP, waa fududaan luuqad loo qaabeeyey xilli kale, iyada oo waxyaabo kale maskaxda lagu hayo, iyo iyada oo aan la tixgelin dhinacyada aan waqtigaas jirin. Sida iska cad, xaqiiqda ah inay tahay tan ugu isticmaalka badan kama dhigeyso tan ugu fiican adduunka, laakiin waxaa jira xaqiiqo: waa luqadda ay ku jirto fursadda ugu weyn ee shaqo looga helo dhammaan barnaamijyada. Ogaanshaha waxba kuma yeeli doono, xitaa haddii aadan jeclayn.
Xitaa Aniga, oo ushaqeynayay Maamulaha Nidaamka muddo dhowr sano ah oo aan ka tagay shaqada horumariyaha, marwalba marwalba waa inaan ku dhejiyaa lambarka PHP wax.
Mahadsanid Gonzalo, waad ku mahadsan tahay wadaagista,
Xaqiiqdii markaan kahadalno culeys xad dhaaf ah oo macluumaad aan loo baahneyn, anagoo og in isku luuqad la turjumi karo ama la soo ururin karo waa wax aan loo baahneyn marxaladan 🙂 Dhab ahaantii hirgalintu waa muhiim, laakiin hadaan dhahno heerkaan, ma dhali karno wax ka badan jahwareer. Si la mid ah, arrimaha barnaamijyada ujeedo-u-jeedka ah looma jeedin, ama fikradaha kale ee ay tahay in si tartiib tartiib ah loo soo uruuriyo si aan dadku u wareerin.
Maaddaama boosku kooban yahay, ujeeddada ugu weyn ee boostada ayaa ah in la tuso akhristayaasha doonaya inay barnaamij ka dhigaan inay jiraan laba adduunyo waaweyn oo luuqado ah, in "dhaqan ahaan" la fasiray ay ka "fudud yihiin", in "dhaqan ahaan" la soo ururiyay ay xoogaa ka badan yihiin "kakan" laakiin in ay mudan tahay heerkaas kakanaanta in la fahmo oo aad u adag iyo in qof walba ay ku xiran tahay in uu doorto luqadda, maadaama ay ku xiran tahay habka barnaamijka, waxay awoodi doonaan inay doortaan mashaariicda ay jecel yihiin iyo isla waqtigaas waxay awoodi doonaan inay fahmaan waxa ay akhriyaan iyo / ama qoraan 🙂
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin salaan.
Tani waa qalad, ma jiraan luuqado la soo uruuriyay ama la tarjumay, waxaa jira tarjumaano iyo isku duwo luqad kasta, labadaba kiisas kala duwan.
Macluumaad xad dhaaf ah ma aha in hadda la sheego, waa qalad in hadal noocaas ah la sameeyo. Aniga aragtidayda, waxay ahaan laheyd wax soo saar badan inaad iska indhatirto tarjumaanada hadaadan rabin inaad buuxiso macluumaad.
Waad ku mahadsantahay cadeynta, waan tixgelin doonaa markaan u soo noqdo mowduuca. Farxad
Luqadee ayaad kugula talineysaa dhinaca serverka adoo tixgelinaya in php uu ka dhacay fadlan?
Waxaa la mid ah keydka macluumaadka, Ma aqaano haddii ay jiri doonaan wax ka wanaagsan kana casrisan kan MySQL.
PHP kama aysan dhicin ficil ahaan ... Luqad kastaa waxay leedahay meertadiisa nololeed, php-na waa hubaal horeyba waa luuqad galaya miisaanka "qaan-gaadh", taas oo ka dhigaysa mid waxtar u leh heerka ganacsiga, halkaas oo xasilloonida ay ka sarreyso wax walba ... Sida bangiyada qaar halka ay wali kasocoto java, oo ka "bisil" php runtiina leh kuwa raacsan iyo kuwa wax quudhsada ... Oo aan lagu xusin COBOL ...
Maalmahan ORM-ka (khariidadaha xiriirka u leh walxaha) waxay helayaan xoog badan marka la eego maareynta xogta xiriirka. Waxay uga socotaa jaangooynta SQL illaa fasalka iyo maaraynta astaamaha ... Ku dhowaad dhammaan luuqadaha (haddii aysan dhammaan ahayn) waxay qabtaan qaar ORM ah.
. Mongo DB waa beddelka keydka macluumaadka ee xiriirka oo noqday mid aad muhiim u ah; si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado faa'iidooyinkeeda iyo qasaarooyinkeeda oo la caddeeyo haddii ay noqon laheyd xalka ugu fiican iyadoo kuxiran baahida gaarka ah.
Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto, salaan 🙂
Mahadsanid, waan hubin doonaa taas.
Maxaad igula talinaysaa inaan la shaqeeyo JAVA ee Linux?.
Haddii aad kala saari karto inta udhaxeysa bilaash iyo tan xiran sifiican.
Eclipse iyo NetBeans waa ilo furan, ma hubo inay jiraan wax si bilaash ah u ah softiweer, waxaan caado u leeyahay inaan isticmaalo vim maxaa yeelay mararka qaar xaddiga koodhku wuxuu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo IDE dhan oo gaabis ah oo u nugul khaladaadka fulinta. Salaan 🙂
La shaqeynta java ee Linux waxaan isticmaalaa IntelliJ waan kugula talinayaa.
Ku jawaab PaulZeta
PS, IntelliJ waa software lahaansho 🙂
Wiilasha sidoo kale waa xusuustaan ​​taas ... Waxaan ka shaqeeyaa bangi waxaanan kuu sheegayaa in luqadaha wax lagu qoro ay kursi dambe ka dhiganayaan si ay ugu oggolaadaan hababka SQL iyo Kaydinta.
Ku jawaab heh
Waa inaad ku xisaabtantaa habraacyada la keydiyay, laakiin adigoon isticmaalin luuqad la qaadan karo inta udhaxeysa matoorada, ugu yaraan khibradeyda, had iyo jeer waa iska ilaalinteeda mooyee inaysan jirin ikhtiyaar kale.